प्राधिकरणले गर्यो पहिलोपटक जलाशययुक्त आयोजनासँग पीपीए !
आयोजनाको काम कहिले हुन्छ पूरा ? लागत कति ?
| 2018-06-30 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ सय ४० मेगावटको तनहुँ जलविद्युत् अयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।
जलाशयुक्त आयोजनासँग गरिएको यो पीपीए प्राधिकरणको पहिलो पटक हो ।
शुक्रबार प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रवन्ध–सञ्चालक प्रदिप कुमार थिकेले पिपिएमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले आउँदो ३० वर्षसम्म खरिद गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार सो आयोजनाले २०८० को अन्त्यसम्ममा उत्पादन सुरु गरिसक्नु पर्नेछ ।
प्रतियुनिट कति तिर्ने ?
प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा सुख्खायाममा प्रतियुनिट १२ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ६ रुपियाँ ०८ पैसामा खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।
आयोजनाका सञ्चारविज्ञ सचेन गौतमका अनुसार आयोजनाबाट कुनै वर्षमा उपलब्ध गराइएको सुख्खायामको उर्जा कुल वाषिर्क उपलब्ध गराइएको उर्जाको ३५ प्रतिशत भन्दा न्यून भएमा त्यस वर्षको लागि भने आयोजनाले जलाशययुक्त आयोजनाको सट्टा अर्ध–जलाशययुक्त आयोजना को लागि तोकिएको खरिद दर लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोअनुसार अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सुख्खायामका लागि १०.५५ र वर्षायामका लागि प्रतियुनिट ४.८० रुपियाँ खरिद दर निर्धारण गरिएको छ ।
सञ्चारविज्ञ गौतमकाअनुसार सो दरमा कम्पनीले वाषिर्क ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म साधारण मूल्यबृद्धि पाउने व्यवस्थाअनुसार मुल्यबृद्धि पश्चात अर्थात ९७ औं महिनादेखि आयोजना अवधिभर खरिद दर प्रतियुनिट सुख्खायाममा १५.३८ र वर्षायाममा ७.५४ रुपयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाको शुख्खायाममा १७ करोड ८९ लाख र वर्षायाममा ३२ करोड ३६ लाख युनिटलाई सम्झौता ऊर्जा निर्धारण गरिएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत ऊर्जा भने दमौली–भरतपुर २ सय २० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहित गरिन भएको छ ।
उक्त आयोजनाको कुल लागत भने अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख अनुमान गरिएको छ ।
काम कहिले हुने पूरा ?
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु पूरा हुने अवस्थामा रहेका छ । मुख्य संरचना निर्माणको लागि भने खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ कम्पनीले बताएको छ ।
सो आयोजनाको मुख्य संरचनाहरुको निर्माणको काम नोभेम्बर २०१८ बाट थालनी गरेर ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
शनिबार १६ असार, २०७५